China Mmiri 500ml Mmiri Sanitizer TECH-BIO ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Zhongrong
Na ihe karịrị afọ 20 na-elekwasị anya na ụlọ ọrụ disinfection
N'okpuru nduzi nke covid-19, Aka Sanitizer na-abụ mkpa nlekọta onwe anyị na ndụ anyị kwa ụbọchị ọkachasị n'ebe ụfọdụ ọhaneze dịka ụlọ akwụkwọ, ụlọ ọgwụ, ụlọ ahịa, họtel, wdg. Ngwaahịa a nwere mmanya 75% nke nwere ike igbu coronavirus na nje ndị ọzọ iji kpuchido ahụike anyị nke ọma. 500ml mkpọ dị ezigbo mma maka iji ezinụlọ yana enwere ike ịmịpụ ihe dị ka ọkara ọnwa. Ka anyị na-emepụta mmanya na-aba n'anya, ọnụahịa anyị ga-abụ nke asọmpi na ogo dị elu maka aka anyị. E wezụga, anyị gafere OA, FDA, na ISO nkwenye. Anyị na-ebupụta ikaNyochaa-BIO -eme ka ọ dị ka Nke 1 ika maka disinfection na China dị ka anyị nwere mma mmanya kacha mma na China. Anyị bụ onye ndu na China maka teknụzụ ethanol. Anyị nwere ihe dị ka narị puku square square square 500,000 na mpaghara Hebei, China. E hiwere ụlọ ọrụ anyị na 1999. Otú ọ dị, anyị nwekwara ike ịnakwere OEM & ODM maka ụdị aka ntanetị niile. Na-atụ anya ịbụ onye gị na ụwa ibe ma mezuo mmeri-mmeri ọnọdụ!
Mpịakọta net: 500ml
Agaghị arụ ọrụ: Mmiri dị ọcha, Carbopol, Isopropyl Alcohol, Triethanolamine, Isi.
Olee “ihe ndị nkịtị” ọ na-eme ka ọ dị ọcha? Ọ ga-egbu corona?
Daalụ maka nnukwu ajụjụ! Anyị ghọtara nke ọma ihe kpatara ị na-ajụ ajụjụ a. Ọ dị mkpa iburu n'uche na FDA akwadoghị ọgwụ ọ bụla ugbu a, gụnyere ndị na-edozi ahụ, iji gbochie ma ọ bụ mesoo covid-19. Anyị na-eburu ibu ọrụ anyị iji hụ na ndị ahịa na-aga ebe kwesịrị ekwesị maka ụdị ozi a, yabụ duzie gị na weebụsaịtị FDA ma ọ bụ CDC iji mụta banyere ọrụ nke ndị sanitizers na igbochi mgbasa nke COVID.
Daalụ maka iru eru TECH-BIO Moisture Hand Sanitizer! Gbalịa pịa nkwụ na nkwụ gị ma jiri aka gị na-atụgharị na klova iji ngwaahịa na-eche gị ihu. Mgbapụta ahụ kwesịrị ịgbapụta.
Nke gara aga: OEM Aka nri
Osote: 50ml Aka Sanitizer jel TECH-BIO